Vaovao - Antony sy tombony azo amin'ny kitapo fandidiana namboarina
Antony sy tombony azo amin'ny kitapo fandidiana namboarina
Ny kitapo fandidiana namboarina dia misy fitaovana fampiasana tokana, izay tena ilaina amin'ny mpitsabo mpitsabo mba hanao hetsika. Ireo fitaovana rehetra ireo dia feno fonosana tsy misy fangarony ary alefa any amin'ny efitrano fandidiana. Ny indostrian'ny fitaovana fitsaboana dia miara-miasa amin'ny dokotera sy klinika hafa mba hamolavolana sy hanaterana fonosana fandidiana amin'ny fomba ara-potoana sy mahomby. Ny kitapo fandidiana dia nisafidy singa, ao anatin'izany: ny lamba famaohana amin'ny lavaka fandidiana, ny lambam-pandidiana, ny zaitra, ny lobolobo fandidiana ary ny fanaingoana ny ratra. Izy io koa dia mety ahitana fitaovana manokana toy ny kateter sy ny implants amin'ny fo. Betsaka ny tombony azo amin'ny fampiasana kit fandidiana natao namboarina. Ireto misy antony dimy tokony handinihanao ny fampiasana kit ho an'ny fandidiana.
1. Ny fandaniana
Amin'ny alàlan'ny famelana ny mpitsabo hiasa amin'ny fomba mahomby kokoa ary amin'izany dia hanao fomba fanao bebe kokoa, ny kitapo fandidiana dia ilaina hamokarana fepetra mahomby. Ny ankamaroan'ny fandinihana dia naneho fa ny fiasan'ny andrim-pitsaboana isan'andro izay niova tamin'ny kitapo fandidiana dia nitombo 30-40%. Satria ny hopitaly dia tsy mila mitazona fitaovam-pitsaboana be dia be, izay mety hahatonga ny tsipika famokarana miadana, lasa mora kokoa ny fitantanana ny vidiny. Manampy ny tompon'andraikitra io amin'ny fanaovana kajy ny vidin'ny fandefasana azy. Ny kitapo fandidiana dia mampihena ny vidin'ny fitantanana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fotoana takiana mba hanafarana sy hitazonana ireo mari-pahaizana momba ny lisitra.
Ny fotoana lanin'ny mpiasa amin'ny fanomanana sy fisafidianana fitaovana fitsaboana amin'ny fandidiana dia nihena be, ary ny tsindry sy ny fotoana fananganana tobim-pitsaboana dia nihena ihany koa. Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny tahiry famatsiana, izany hoe ny famelana mpamatsy maro hanome mpamatsy samihafa, ny mpitsabo dia afaka mitsitsy ny fotoana fitantanana, ary ny fotoana voatahiry dia azo ampiasaina amin'ny fikarakarana marary.
Ny kitapo fandidiana dia manome fitaovana mety amin'ny fotoana mety, fandaminana mety ary toerana mety. Ny fonosana fandidiana dia manome ny singa rehetra ao anaty fonosana tsy misy fangarony, amin'izay manome fanaraha-maso aseptika mety ary hahatonga ny marary tsy ho voan'ny aretina mifandraika amin'ny fitsaboana. Amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny faharetan'ny marary sy ny fampihenana ny fotoana famaliana dia afaka manatsara ny kalitaon'ny serivisy ireo fitaovana fandidiana.
Satria ny fonosana rehetra dia miaraka amina fonosana, ny fanarahan-dia ny batch dia notsorina. Noho ny fampielezana be dia be ny kitapo fandidiana, maro ireo fikambanana mampiasa fitaovana fandidiana no nanara-penitra ny fomba fanao maro, ka manatsara ny kalitaony. Ireo mpikarakara fikarakarana ara-pahasalamana dia afaka mamorona torolàlana mora foana hanombanana tsara ny tenany miankina amin'ny fepetra napetraka izay azo heverina ho hentitra loatra.
4. Tontolo iainana
Ny habetsaky ny fako ateraky ny singa iray dia azo ahena hatramin'ny 50%.
5. Hatsarao ny fahombiazany
Ny fahombiazan'ny avo kokoa dia midika fa ny fotoana fanomanana dia lava be, noho izany dia misy fomba maro kokoa azo vitaina ao anatin'ny iray andro. Afaka mampihena ny fotoana fiandrasan'ny marary, ary afaka miditra aloha